AmaGonads abesilisa nabasetyhini - iimvavanyo kunye nama-ovari
Ingqungquthela kwiGonads yabesilisa nabasetyhini
I-Gonads yindoda yokuzala izithandane kunye namabhinqa. Iigonads zamadoda zii-testes kwaye iigonads zezilwanyana ziyi-ovaries. Ezi zitho zenkqubo yokuzala ziyimfuneko ekuveliseni ngokwesondo njengoko zinoxanduva lokuveliswa kwamagetet eendoda kunye nabasetyhini. I-Gonads iphinda ivelise amahomoni e- sex efunekayo ekukhuleni nasekuphuhlisweni kwezitho zokuzala kunye neziseko zesiseko.
I-Gonads kunye neHormones yesondo
Amadoda aseGonads (amaVavanyo) kunye neGonads yamaBhinqa (ama-Ovari). UbuGcisa be-NIH / u-Alan Hoofring / uDon Bliss / I-National Cancer Institute
Njengengxenye yenkqubo ye- endocrine , i-gonads yamadoda kunye nabesifazane ivelisa ama-hormone esondo. Amahomoni wesini kunye namabhinqa ama-hormone e- steroid kwaye kunjalo, angadlula kwi- membrane yeseli yeekisi zazo ezijoliswe kuzo ukuba zichaphazele ukubonakaliswa kwegazi kumaseli. Imveliso ye-horonone ye-Gonadal ilawulwa yi-hormone efihliweyo yimbozi yangaphambili engqondweni . IiHormone ezikhuthaza i-gonads ukuvelisa i-hormone yesondo zibizwa ngokuba yi- gonadotropins . I-pituitary ifihla i-gonadotropins i-hormone i-hormone (LH) kunye ne-follicle-stimulating hormone (FSH) . Ezi prothemoni ze- protein zithonya izitho zokuzala ngezindlela ezahlukeneyo. I-LH ivuselela iimvavanyo ukuba zenze i-hormone ye-hormone ye-testosterone kunye ne-ovari ukufaka i-progeterone kunye ne-estrogens. I-FSH inids ekuveliseni izilwanyana ze-ovarian (iisaka ezine-ova) kuma-femines kunye nemveliso yesilisa kubesilisa.
I-Gonad yamaHormones aseTyhini
Iimpomoni eziphambili zama-ovari zi-estrogens kunye neprogesterone.
I-Estrogens - Iqela lama-hormone eentlobano zesini kubalulekile ukuvelisa kunye nokuphuhlisa impawu zesini zesini. U-Estrogens unoxanduva lokukhula kunye nokukhula komlenze kunye nesisu; phuhliso lwebele; Ukwandiswa kweeplanga; ukuhanjiswa kwamanqina amaninzi emagqabeni, emathangeni, nasebele; Utsho utshintsho ngexesha lomjikelezo wesini; kunye nokwanda kweenwele zomzimba.
Iprogesterone - iHormone esebenzayo ukulungiselela isisu sokukhulelwa; Ulawula utshintsho lwamaqanda ngexesha lomjikelezo wesini; ukwandisa umnqweno wesini; zokuncedisa kwi-ovulation; kwaye ikhuthaza ukuveliswa kwegulane kwimveliso yobisi ngexesha lokukhulelwa.
Androstenedione - I-androgen hormone ekhonza njengophambi kwe testosterone kunye ne-estrogens.
I-Activin - IHormone ekhuthaza umveliso kunye nokukhululwa kwe-hormone evuselela i-hormone (FSH). Kwakhona kuncedisa kwimimiselo yomjikelezo wesini.
I-inhibin - iHormone evimbela ukuveliswa nokukhululwa kwe-FSH.
Amadoda aseGonad amaHormones
I-Androgens yimi-hormone echaphazela kakhulu ukuphuhliswa kwenkqubo yokuzala . Nangona ifunyenwe kumazinga aphakamileyo kakhulu kumadoda, i-androgens nayo iveliswa ngabasetyhini. I-Testosterone yi-androgen eyona nto ifihliwe yi-testes.
I-Testosterone - I-hormone yesondo ebalulekileyo ekuphuhlisweni kwezitho zesini zesini kunye neempawu zesini. I-Testosterone inoxanduva lokunyuka kwesisundu kunye neethambo ; ukwanda kweenwele zomzimba; nophuhliso lwamagxa aphezulu; ukunyaniseka kwezwi; kunye nokukhula kwepenisi.
I-Androstenedione - IHormone ekhonza njenge-precursor kwi-testosterone ne-estrogens.
I-inhibin - iHormone evimbela ukukhululwa kwe-FSH kwaye kucatshangelwa ukuba ibandakanyeke ekuphuculweni kweseli yesininzi kunye nommiselo.
Gonads: Umgaqo weHormonal
I-hormone yesondo inokulawulwa ngamanye ama-hormone, ngeengqungquthela kunye nezitho, nangendlela yokuphazamiseka kwengxelo. IiHormone ezilawula ukukhululwa kwamanye amahomoni kuthiwa ama-hormone e-tropic . I-Gonadotropins yi-hormone ye-tropic elawula ukukhululwa kwe-hormone yesondo nge-gonads. Uninzi lwama-hormone eTropi kunye ne-gonadotropins i-FSH kunye ne-LH zifihliwe yi- pituitary yangaphambili. I-Gonadotropin secretion ilawulwa yi-hormone ye-tropic gonadotropin-ikhipha i-hormone (GnRH) , eyenziwa yi- hypothalamus . I-GnRH ikhishwe kwi-hypothalamus ivuselela i-pituitary ukukhulula i-gonadotropins i-FSH ne-LH. I-FSH kunye ne-LH ngokufanelekileyo ivuselela i-gonads ukuvelisa nokuthumela i-hormone yesini.
Ukulawulwa kwemveliso ye-hormone yesini kunye nokuyimfihlo kuyomzekelo wendlela yokuphendula engalunganga . Kwimimiselo engabonakaliyo yempendulo, ukuvuselelwa kokuqala kuncitshiswe yimpendulo. Impendulo iyakhupha i-stimulus yokuqala kunye nendlela iya kugqitywa. Ukukhululwa kwe-GnRH kushukumisa i-pituitary ukukhulula i-LH ne-FSH. I-LH ne-FSH ikhuthaza i-gonads ukukhulula i-testosterone okanye i-estrogen kunye neprogesterone. Njengoko ezo hormone zesondo zijikeleza egazini , ukunyuka kwawo okubonakalayo kufunyanwa yi-hypothalamus kunye ne-pituitary. I-hormones yesini inceda ekunqandeni ukukhululwa kwe-GnRH, i-LH, ne-FSH, ekhokelela ekunciphiseni imveliso ye-hormone yesini kunye nokuvalwa.
Gonads Abesilisa nabasetyhini
I-color scanning electron micrograph (SEM) yamaseli esidoda (spermatozoa) kwiimithi ze-seminiferous ze-testis. Le yindawo yesityalo se-spermatogenesis (ukuveliswa kwesidoda). Inxalenye yesilwanyana nganye inentloko (eluhlaza), equlethe izinto eziphathekayo ezizalisa isilili yeqanda lezilwanyana, kunye nomsila (obuluhlaza), okhuthaza umoya. Iintloko zebhindi zingcwatyelwa kwiiseliti zeSellili (eziphuzi kunye neelant), ezondla i-sperm. ISUSUMU NISHINAGA / I-Photo Photo Library / Getty Izithombe
Imveliso yeGonads neGamete
IiGonads ziphi na iipalethi zezilwanyana kunye namabhinqa eziveliswayo. Ukuveliswa kweeselusi zesininzi kuthiwa yi- spermatogenesis . Le nqubo iqhubeka ngokuqhubekayo kwaye iyenzeka kwiimvavanyo zeendoda. Inqwelwana yesigane okanye i- spermatocyte ihamba kwinkqubo yesahlulo sesibini yecandelo elibizwa ngokuthi i- meiosis . I-Meiosis ivelisa iiseli zesini kunye nesiqingatha senani lama- chromosomes njengeseli lomzali. Amaseli wesini kunye namabhinqa angama- Haploid adibanisa ngexesha lokuchumisa ukuze abe yinye cell cell ebizwa ngokuthi yi-zygote. Amakhulu amabhiliyoni esidoda kufuneka akhululwe ukwenzela ukuba ukuchumisa kwenzeke.
I-Oogenesis (uphuhliso lwe-ovum) livela kuma-ovari oomfazi. Emva kokuba i- meiosis iphelele, i- oocyte (iqanda leqanda) libizwa ngokuba yi-oocyte yesibini. I-oocyte yesibini yesi-haploid iya kugqiba kuphela isigaba sesibini se-meiotic xa idibana ne-sperm cell kunye nochumiso luqala. Emva kokuba utyalo luqaliswe, i-oocyte yesibini igqiba i- meiosis II kwaye ibizwa ngokuba yi-ovum. Xa ukuchumisa kuzalisekile, ubumbano obumbeneyo kunye ne-ovum baba yi-zygote. I-zygote yiseli ekwasekuqaleni kwenkqubo yophuhliso lwama-embryonic. Ibhinqa liya kuqhubeka livelise amaqanda kuze kube yimihla yokumisa. Ekupheleni kwexesha, kukho ukwehla kwimveliso yeeHmmoni ezikhuthaza ukuvuthwa. Le yinkqubo eqhelekileyo eyenzekayo eyenzeka njengabasetyhini abaqolileyo, ngokuqhelekileyo ngaphezu kweminyaka engama-50.
Iziphazamiso zeGonadal zivela ngenxa yokuphazamiseka kwisakhiwo somsebenzi wendoda okanye ibhinqa. Iziphazamiso ezichaphazela ama-ovari ziquka umdlavuza we- ovari, ii-cyst ovarian, kunye ne-ovarian torsion. Izifo ze-gonadal ezichaphazelekayo ezinxulumene ne-hormone ye- endocrine ziquka i-polycystic ovary syndrome (iziphumo ezibangelwa ukungalingani kwe-hormone) kunye ne-amenorrhea (ayikho ixesha lokuya esikhathini. Iintlungu zamathambo ezintloko ziquka ukutyala kwetestular (ukuphambana kwentambo ye-spermatic), umdlavuza we-testicular, i-epididymitis (ukuvuvukala kwe-epididymis), kunye ne-hypogonadism (amathongeni awavelisi i-testosterone eyaneleyo).
Iimodyuli zoQeqesho zoLwazi, Isingeniso kwiNkqubo ye-Endocrine. Amaziko eZwelonke wezeMpilo, iNational Cancer Institute. Ukufikeleleka ngo-21 Oktobha 2013. http://training.seer.cancer.gov/anatomy/endocrine/
Iimodyuli zoQeqesho zoQeqesho, Isingeniso kwiNkqubo yokuBala. Amaziko eZwelonke wezeMpilo, iNational Cancer Institute. Kufumaneke ngomhla we-24 kuJanuwari 2014. http://training.seer.cancer.gov/anatomy/reproductive/
I-Circulatory System: IiPulmonary and Systemic Circuits
Funda Ngomsebenzi we-Gine Plandal
Umsebenzi we-Hypothalamus kunye noveliso lweHormone
Ukuphononongwa: Michelin Michelin Pilot Sport A / S 3
I-Perl Array Shift () Umsebenzi - I-Quick Tutorial
Abanini bamalungelo abenzi baseMelika baseMelika - MN
Yonke Ngokuphathelele Ukugula Okunyanzelekileyo
Inkcazo ye 'Brane'
Yiyiphi Intlanzi efana Nexesha Eliphakathi
Imbali yeBhola yeBhoksi yaseMerika eMelika